Tonga soa eto amin'ny EXCITECH
Vahaolana Ho Panel Furniture
Automatic Cabinet Door Vahaolana
Automatic akany Vahaolana
Dimy-Axe Machining Center
Work foibe Ary CNC ny router
Ny Fanoloran-tena ho Excellence
Excitech, matihanina orinasa mpanamboatra fitaovana, dia naorina ny manavaka mpanjifa indrindra ao an-tsaina. Miaraka amin'ny orinasa mpamokatra entana toerana any Shina nefa hentitra mitana ny fenitra faran'izay tsara, ny vokatra azo antoka fa hanatanteraka avo amin'ny fametrahana mazava tsara ny fe-potoana lava indrindra ho an'ny nitaky ezaka lehibe indrindra indostrialy fepetra.
State-of-ny-Art Products sy Facilities
Ny maro samihafa azo mora avo lenta portfolio-dia ahitana Panel Furniture Production Solutions, Multi-salantsalany 5-mpiray Machining Foibe, Panel tsofa, Point-to-Point Asa Foibe sy ireo nanolo-tena ho feon'ireo machineries sy ny fampiharana hafa manan-danja.
Quality dia tsy outsourced-izany no antony efa vola mafy ao amin 'ny machining toerana. Ny vokatra rehetra, avy amin'ny ara-toekarena indrindra modely ho an'ny tena sarotra ny fametrahana mazava tsara ireo hoatr'izany mba hiantohana ny fenitra ambony andrasana avy amin'ny orinasa toy ny Excitech. Ny dingana rehetra dia antsakany sy andavany orinasa mpamokatra entana, ary amin'ny fomba maso mba hahatratra ny antoka sy ny fametrahana mazava tsara kalitao.
Ny zavatra ilaina, ny Fitondrana Fiara Force!
Koa izahay ampanjifaina vahaolana araka ny zavatra ilaina. Na dia manomboka raharaham-barotra na-up asa amin'ny ambaratonga kely vidin'ny famokarana mahomby ao an-tsaina, na miorina asa goavana mitady tena mandeha ho azy foana projects- Excitech manana vahaolana ho an'ny orinasa mpamokatra entana zavatra ilaina.
Manolo-tena isika manao ny raharaham-barotra ny fahombiazana amin'ny fanomezana vahaolana namboarina ilaina eo amin'ny tratranao ny tanjonao. Ny fampidirana ny miray volo machineries amin'ny indostria sy ny automatique rafitra rindrambaiko Manatsara ny mpiara-miasa 'mifaninana tombony amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo hahazo:
High quality vokatra ny fahombiazan'ny famokarana avo
Ambany ny vola lany dia toy izany no azo refesina tahiry
Fohy ny fotoana famokarana
Fanalehibiazana fahafahana ho tsara kokoa tombony
Mihena be tsingerin'ny fotoana
Global Fanatrehan'i, Local Vokatr'izay
Excitech Voaporofo-toetra ny tenany hendry noho ny fahombiazana anatrehan'i amin'ny firenena 90 mahery eran-tany. Tohanan'ny matanjaka sy mikaroka ny varotra sy ny varotra Network ary koa ny fanohanana ara-teknika ekipa izay tsara ofana sy nataony eo amin'ny fanomezana ny mpiara-miasa ny tsara indrindra fanompoana, Excitech dia nahazo manerantany nalaza ho iray amin'ireo tena azo antoka ary natoky CNC milina vahaolana mpanome tolotra.
Natokana mba Hanompo Anao
Ao Excitech, isika dia tsy hoe ny orinasa mpanamboatra. Izahay raharaham-barotra sy ny raharaham-barotra mpanolo mpiara-miombon'antoka.
Ny ara-teknika fahaizana, ny kalitao ny vokatra, ny toetry ny ny kanto orinasa mpamokatra entana trano, ny hery eo amin'ny mpanjifa, ny mahay varotra toro-hevitra, ary ny fanoloran-tena ny fikarohana sy ny raharaham-barotra ny fampandrosoana - Ireo rehetra ireo dia aseho ho an'ny mpiara-miasa manerana izao tontolo izao ao amin'ny manantena ny manampy azy ireo mba hahazo fahombiazana.
Adiresy: NO.1832 GANGYUANQI RD, Distrikan'ny High-Tech Jinan, Faritanin'i Shandong, PRChina
Vahaolana ho an'ny fanaka panel
Toeram-piasana sy ny CNC Router